Tsara ho an'ny bisikileta ve i Beta Alanine? - Bisikileta
Tena > Bisikileta > Beta alanine bisikileta - ny mpitari-dalana farany
Beta alanine bisikileta - ny mpitari-dalana farany
Tsara ho an'ny bisikileta ve i Beta Alanine?
Beta alaninemiasa amin'ny fomba mitovy amin'izany. Mampitombo ny haavon'ny carnosine ary, amin'ny fanatsarana ny bufferan'ny sela, mampihena ny haavon'ny lactate izany ahazakazaka am-bisikileta, triathlete, mpilalao baolina na mpilomano dia mety hanao tsara kokoa.Beta alaninedia mahomby indrindra amin'ny sprint sy amin'ny elanelam-potoana fohy kokoa.
fampiharana bisikileta ho an'ny fiambenana paoma
Ny ankamaroan'ny mpahay sakafo dia manome soso-kevitra amin'ny sakafo voalanjalanja ho an'ny besinimaro, fa ny fanatanjahan-tena mafy dia mety hampitombo ny filan'ny otrikaina sasany. Eto izahay dia manazava ny sasany amin'ny otrikaina tsara indrindra sy ny famenon-tsakafo mety hoheverinao hampitombo ny fahombiazanao. Ara-dalàna tanteraka, azoko ampiana.
Ny vy dia tokony ho laharana voalohany. Ny vy dia iray amin'ireo micronutrient manan-danja indrindra amin'ny bisikileta maharitra. Izy io dia singa iray manakiana ny hemoglobinina izay mitondra oksizenina manerana ny vatana.
Ny haavon'ny vy ambany dia manimba ny fampisehoana. Ankehitriny ny vy dia misy endrika roa, Heme sy non-heme. Ny vy Heme dia avy amin'ny loharanom-biby fa ny non-heme dia avy amin'ny zavamaniry.
Ary somary tsy dia voafehiny tsara ilay izy. Zava-dehibe ny fahafantarana ny teknika izay ampiasaina hitsaboana ny vy avo Ampitomboy ny fihinanana. Satria ny tantara vy dia tsy hoe momba ny habetsaky ny fampiasanao ihany, fa koa amin'ny fomba fandraisanao azy tsara.
Ohatra, ny fananana vitamina C amin'ny vy dia hanampy anao hampitombo ny sakafonao, fa ny fibre de diet sy ny tannins amin'ny dite sy kafe kosa dia hanakana ny fitrohana vy. Sombin-javatra iray hafa amin'ny piozila dia ny vy tsy voadoka tsara aorian'ny fampihetseham-batana satria ny hepcidin, izay avoakan'ny aty hanakanana ny fitrohana vy, dia mitombo aorian'ny fihenjanana sy fanatanjahan-tena. Ny sakafo be vy dia misy hena mena toy ny hen'omby, Ostrich, kangaroo, osters, ary atin'ny akoho.
Ho an'ireo izay tsy mihinana hena dia misy ihany koa legume ferrous toy ny voanio, soja, tofu, ary voamaina toy ny vary volontsôkôlà, ary zavatra hafa toy ny apricot namboarina, molotra ary serealy sakafo maraina mimanda. Ary mety mendrika hodinihina ny fanampim-panazavana. Mbola mandray pilina vy isan'andro aho.
Ary fantatro tsara fa misy dokotera manao fanatanjahan-tena milaza fa ny mpitondra bisikileta rehetra dia tokony hitondra fanampin-tsolika, indrindra ny vehivavy, satria hitan'izy ireo fa manampy ny ankamaroan'ny olona hanao fampisehoana tsara kokoa izany. Mety hitranga izany satria ny soatoavina fototra ho an'ny Normal dia napetraka ambany loatra ho an'ny isan'ny mponina. Na mety ho ny fisian'ny vy lehibe kokoa ao amin'ny vatana dia manampy amin'ny fampisehoana.
Ataovy foana ny fameniko vy mba hahafahako mitondra fiara hiasa haingana kokoa - Vitamina B12 dia manana fiasa maro ao amin'ny vatana. Na izany aza, dia ampiasaina indrindra amin'ny fiasa voajanahary sy ara-dalàna ny ati-doha sy ny rafi-pitabatabana afovoany; ary ho an'ny fananganana sela mena. Noho izany, toy ny vy, dia ampahany tena ilaina amin'ny sakafo bisikileta.
Ny tsy fahampian'ny B12 amin'ny sakafo dia mety miteraka tsy fahampian-dra na dia tsy dia mitovy amin'ny anemia aza vokatry ny tsy fahampian'ny vitamina B12, vy, rehefa tsy ampy B12 ianao, io anemia io dia mahatonga ny vatana hamokatra sela mitombo tsy ara-dalàna izay very ny fahafaha-mitondra oksizenina. Tsy mety. Ny sakafo manankarena ao amin'ny B12 dia misy trondro, hena, atody ary vokatra vita amin'ny ronono, saingy tsy misy loharano azo antoka B12 amin'ny sakafon'ny zavamaniry hafa ankoatry ny efa nohamafisina, toy ny ronono an-javamaniry sy serealy sakafo maraina.
Ka raha mihinana sakafo mifototra amin'ny zavamaniry ianao, dia eritrereto ny maka fanampin-tsakafo raha tsy mampiasa ireo fomba hafa mimanda ireo ianao. Ny fitsapana ra tsotra dia azo ampiasaina hamantarana raha tsy ampy asidra folika ianao. Fantatra amin'ny hoe vitamina amin'ny masoandro koa izy io mba hilentehana ny kalsioma ary hikolokoloana ny taolana azo antoka.
Ka ny tsy fahampiana dia mety hitarika any amin'ny taolana mora vonoina, izany hoe mpitaingina bisikileta, raha tsy mizatra amin'ny lanjanao ianao dia mety ho mora tohina ihany. Naseho koa fa mitana andraikitra lehibe amin'ny hery fiarovan'ny vatana sy manatsara ny tanjaky ny hozatra, izay toa tsara daholo. Ankehitriny ny loharanon'ny vitamina D tsara indrindra dia ny fanaovana ny sela misy anao amin'ny hazavan'ny masoandro ary mila mihinana zavatra toy ny trondro, atody ary sakafo mimanda koa ianao.
Na eo aza ny sakafo voalanjalanja dia mety tsy ho ampy vitamine D. Um ianao, raha monina any amin'ny firenena izay manana ririnina lava sy mangatsiaka toa an'i UK, na tsy mahazo tara-masoandro ianao, na raha ny tena izy, raha miaina amin'ny tany mafana be nefa mitafy sunscreen SPF avo lenta. Ary eny, ny tsy fahampian'ny vitamina D dia zavatra iray ihany koa any Aostralia.
Ary amin'izany, mety te handinika ny famenon-tsakafo vitamina D ianao, hatramin'ny 10 milligrams isan'andro. Uh, mbola ataoko ihany izany na dia mahazo masoandro am-bisikileta be aza aho. Ny menaka Omega-3 dia karazana asidra matavy polyunsaturated tena ilaina izay tsy maintsy lalovantsika amin'ny sakafontsika ary tsy azontsika atao amin'ny vatantsika.
Omega-3 dia misy asidra matavy roa izao. Manana DHA sy EPA izy ireo ary tsy mangataka aminao aho mba hanonona feno ireo anarana ireo. Manokana, ny EPA dia naseho mba hampihenana ny valin'ny fivontosana ao amin'ny sela raha tsy hoe afaka manampy amin'ny famerenana amin'ny laoniny sy ny tsimatimanota izy io.
Ny zava-misy mahaliana iray hafa momba ny menaka omega-3 dia ny fiatraikany amin'ny selan'ny rà mena, mahatonga azy ireo ho mora zakaina kokoa mba hahafahan'izy ireo mandalo capillaries kely kokoa. Raha misafidy ny manampy menaka omega-3 ianao dia zava-dehibe ny hahazoana antoka fa mahazo kapsily tsara kalitao ianao ary manana ny tahan'ny EPA hatramin'ny DHA marina. Na misafidy fanampim-panafody EPA fotsiny aza raha ny mamaivay tianao hampihena no ho alaiko.
EPA madio, indray mandeha isan'andro. Creatine dia zavatra simika voajanahary ao amin'ny vatana. Manampy amin'ny famoahana angovo mandritra ny fiezahana anaerobika io.
Izany dia mahatonga azy ho malaza be amin'ny fanatanjahan-tena sprint. Fa mety hahasoa ihany koa ho an'ireo mpitaingina fiaretana sasany. Ny zava-mitranga eny an-dàlana, mazava ho azy, dia misy sprint miverimberina manafika na manarona famaky.
Na izany aza, ny lafy ratsy dia ny fampiroboroboana ny fihazonana rano, ary noho izany dia afaka mahazo rano iray na roa kilao ianao rehefa mandray zavaboary. Ny programa fanatanjahan-tena dia naseho mba hampitomboana ny hozatry ny hozatra ary hahatonga ny fampihetseham-batana hahomby kokoa. Raha tsy mampaninona anao ny manana hozatra fanampiny.
Ary mazava ho azy, manana fotoana be dia be ianao hanerena an'io alohan'ny hanodinana ny fiandohan'ny vanim-potoana ho zavatra bisikileta izay manemotra ny fahasimban'ny sela ateraky ny radika afaka. Ka rehefa manao fanatanjahan-tena isika dia manisy fihenjanana amin'ny vatana. Mampitombo ny famokarana radika maimaim-poana, toy ny karazana oksizenina radioaktifa na ROX, izay mety hisy fiatraikany ratsy amin'ny vatana.
Ankehitriny dia mila fifandanjana eo anelanelan'ireny radika maimaim-poana ireny sy ireo antioxidant ho an'ny fiasa ara-batana mahazatra. Eny tokoa, mila an'ireny radika maimaim-poana ireny ianao mba hampirisihana ny valin-fanatanjahan-tena. Ka tsy te hampihena ny adin-tsaina eo noho eo.
Na izany aza, tsy azo lavina fa ny antioxidant toy ny vitamina C sy ny vitamina A dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fanohanana ny hery fiarovan'ny vatana. Mahaliana fa na dia fantatsika aza izany, ny fandinihana ny fijerena ireo antioksida maningana dia tsy nisy fiatraikany tsara tamin'ny fampihenana ny lozam-pifamoivoizana amin'ny fahafantarana fa ny fihinana voankazo sy legioma be sakafo dia mety hisy vokany miaro. Tsy azontsika antoka raha noho ny atin'ny antioxidant izany.
Fa na izany na tsy izany, rehefa mahazo ny vatanao amin'ny alàlan'ny bisikileta ianao, dia azo ampiasaina ihany ny voankazo betsaka indrindra ny legioma. Ary famenon-tsakafo malaza sy miharo vovo-dronono dia ny ranom-boasary maraschino, izay matsiro ihany koa. Ny ranom-boankazo dia misy fiatraikany mahomby amin'ny fampisehoana fanatanjahan-tena, ary indrindra indrindra izany dia afaka manampy ny bisikileta amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny fahaizan'ny aerobic.
Ankehitriny, ny bitroot dia tsy vitan'ny vitamina, mineraly ary otrikaina mahavelona ihany, fa feno nitrates koa izay hita voajanahary amin'ny legioma isan-karazany, fa indrindra mifantoka amin'ny faka bitika, izay azo tsindriana ary hanjary ho ranom-boankazo, raha manana an'io Mitrate nitrate amin'ny ranom-boankazo io isika, dia avadika ho azôty azôty amin'ny vatana. Io oksida azota io dia naseho hampihena ny tosi-dra ary noho izany dia hita fa mety hanampy amin'ny fanatsarana. Ny vokatra lehibe ateraky ny azota azota dia ny manaparitaka ny lalan-drantsika, izay midika fa mihabe ny savaivony.
Arakaraka ny fiparitahan'ny sambo, ny rà be oxygène dia afaka mikoriana mankamin'ny hozatra, izay ilaina amin'ny fisefoana aerôbika. Ary arakaraky ny habetsahan'ny oxygen ao amin'ny hozanao no mahamaro ny ATP na angovo azo vokarina. Ankehitriny ny ranom-boankazo dia misy fiantraikany amin'ny haavon'ny molekiola ihany koa, na dia somary manahirana ahy aza izany.
Ary ny ranom-boankazo dia azo antoka fa misy vokany mahaliana amin'ny lokon'ny kotrokao sy ny minao, mahatonga azy ireo ho mena mena, ary somary nanaitra ihany tamin'ny fotoana nanandramanao azy. Ah, ho hitanao ny tiako holazaina, raha manandrana ranom-boankazo ianao dia foto-tsakafon'ny mpitaingina bisikileta rehetra, na cappuccino na espresso na fotsy fotsy na pikcolo aza, maro amintsika no miankina aminy alohan'ny hanaovantsika mitaingina bisikileta. Saingy tena misy fiatraikany amin'ny fampisehoana bisikileta eto amintsika? Raha ny marina dia naseho ny kafeinina hanatsara ny fahombiazan'ny ankamaroan'ny karazana fanatanjahan-tena.
Manomboka amin'ny sprint ka hatrany amin'ny hetsika maharitra faharetana. Tena nieritreritra izahay fa hametraka izany amin'ny fitsapana amin'ny andrana GCN anay manokana. Ohatra, angamba hanandrana dimy kilometatra, fitsarana mandritra ny fotoana rehetra.
Fitsapana amin'ny andro samihafa. Iray miaraka amin'ny kafe voafatra. Ny maha samy hafa azy dia ny kafe iray kafeina ary ny iray kosa déafféine.
Mampalahelo fa tsy nahavita GCN na iray aza izahay hatreto -Manaova mpanolotra hevitra hanaiky bisikileta aorian'ny kafe tsy misy kafe. Ka tsy nanao an'io fanandramana io izahay, fa mbola manamboatra azy io, ka jereo ity faritra ity. Te-hamerina aho fa ny zava-dehibe indrindra hijanonana ho salama sy hatanjaka amin'ny bisikiletanao dia ny fihinanana sakafo voalanjalanja, ary tokony hiezaka ny hahazo ny otrikainao amin'izany fomba izany ianao.
Ny fanampin-tsakafo dia tokony hoheverina ho vahaolana farany. Tsy ny zavatra voalohany tadiavinao. Eo izy ireo hanampiana ny sakafonao rehefa mila azy ireo ianao.
Miaraka amin'ireo otrikaina rehetra efa noresahintsika, betsaka kokoa no tsy tsara kokoa; raha ny marina dia be loatra ny tena mety manimba. Raha mahazo izay ilainao ny sakafonao dia tsy handany vola amin'ny pilina lafo vidy ianao. Zavatra iray hafa tokony hilazana koa fa ny famenon-tsakafo dia tsy fehezina mitovy amin'ny fanafody.
Misy ny famenon-kalitao tsara sy ny famenon-kalitao tsy tsara kalitao any ary tsy azonao atokisana foana ilay marika. tsy mila. Mety hieritreritra ianao fa ny fandotoana fanampiny, ary ny loza mety hosedraina, dia olana ihany ho an'ireo atleta matihanina.
Saingy tsy misy olona tena te hanampy zavatra tsy fantatra amin'ny vatany. Ka rehefa mividy fanampin-tsakafo dia alao amin'ny loharanom-pahalalana azo antoka ary diniho tsara ny fividianana orinasa iray efa nahazo fanamarinana ara-panatanjahantena, manantena aho fa ity lahatsoratra ity dia manampy anao hanana dimy isan-jato fanampiny, na angamba iray isan-jato hanampy anao hahatratra ny tanjonao. Raha manana fanontaniana hafa momba ny famenon-tsakafo ianao dia avelao izy ireo haneho hevitra.
Aza adino ny manome thumbs up antsika - zarao amin'ny namanao izany, ary raha te hahalala bebe kokoa ny antony maha-zava-dehibe izany ianao. Na dia zava-dehibe aza ny fividianana fanampin-tsakafo madio dia tsindrio eto raha hijery lahatsoratra Cy vita amin'ny Informed Sport.
Afaka mihinana beta alanine isan'andro ve ianao?
Ny fatra atolotra dia 25 grama isan'andro. Na dia miteraka fikolokoloana amin'ny hoditra aza ny habetsahana be loatra,beta-alaninedia raisina ho fanampiana azo antoka sy mahomby hanamafisana ny fahombiazan'ny fanatanjahan-tena.
Inona no mitranga ry zalahy? Jeff Cavaliere, ATHLEANX. COM. Roa herinandro lasa izay dia nanao lahatsoratra nanokatra ny lalimoam-vitako aho.
Nasehoko anao ny vitamina sy ny supplement rehetra izay raisiko isan'andro, fanontaniana fanaraha-maso maro, ary ny ankamaroany dia tsy momba ny famenony fotsiny, fa koa momba ny fiofanana, ary izay mifanaraka amin'ny zotram-potoana mifototra amin'ny tarehin-taona. Rahoviana no tokony hanombohana fiofanana Rahoviana ianao no tokony hihinana fanafody fanampiny? Rahoviana no mety ny fanaovana azy? Ka nieritreritra aho hoe maninona raha manamboatra lahatsoratra fanaraha-maso iray hafa izay miresaka momba ilay antsoiko hoe Timplement Supplement, izay miresaka momba ireo sokajy famenon-tsakafo lehibe. Rehefa mahatsapa aho fa misy olona efa lehibe, ny zavatra tsara indrindra tokony hatao dia ny mandray zavatra ary hiresaka ny fanazaran-tena koa izahay.
Azontsika atao koa ny miresaka amin'ireo sampana fiofanana eo noho eo. Manontany ahy ny olona, ​​Jeff, rahoviana no mety ny manomboka manainga lanja ny zanako lahy? “Tsy mamporisika ny hanombohana lanja amin'ity sokajin-taona voalohany ity aho, 10 ka hatramin'ny 13 taona na mazava ho azy kely noho ny olona rehetra. Heveriko fa tsara ny fanatanjahan-tena sy ny fampiofanana amin'ny vanim-potoana rehetra.
Manofana ankizy latsaky ny 10 taona akory ve ianao? dia tratra amin'ny endrika lalao sasany. Mijery ankizy any ivelany ianao ary hilalao izy ireo fa hanao lunges amin'ny ankapobeny. Mitsambikina boaty izy ireo rehefa mitsambikina amin'ny vato.
Mihetsiketsika be dia be izy ireo izay ataontsika ao amin'ny gym, izay antsoinay zavatra hafa, ary antsoin'izy ireo hoe milalao fotsiny izany. Tsara izany. Mampiorina ny sain'ny vatana izany.
Manangana fandrindrana. Manangana ny hery fototra izy io. Amin'izany sokajin-taona 10 ka hatramin'ny 13 izany, moa ve tsy lanjaiko izy ireo.
Tsy mila an'izany ianao. Ny ankamaroan'ny fotoana hitako fa ny ankizy dia mbola tsy voarindra tsara amin'izao vanim-potoana izao. Ary tsy maintsy mianatra ny fomba hifehezana ny vatany izy ireo, noho izany ny programa fampiofanana momba ny lanjan'ny vatana, ny tarika fanoherana, tsara daholo.
kitapo fametahana bisikileta
Tsy dia ilaina loatra ny lanjany mandra-panombohanao miditra amin'ny taonan'ny fahatanoranao, ary avy eo dia lasa tena mora tokoa. Ny lanja mandritra ny androm-piainanao, hatramin'ny 80 taona lasa. Azonao atao ny manangana lanja sy manangana hozatra tsara hatrany amin'ny fahanterana raha toa ianao ka manohy miasa amin'ny fampihetseham-batanao kely amin'ny herinao fony ianao 20 taona, fa raha oharina amin'ny zavatra tsapanao tamin'ny taona 70 sy 80, dia tokony tazominao izany. manao izay tsara indrindra vitanao sy manandrana manangana hozatra sy tanjaka satria ny valiny sy ny fikarohana dia naneho fa mbola vitanao izany.
Mbola vitanao io. Angamba tsy mora toa ny teto amin'ity taona niforona ity, fa azonao atao izany Noho izany, ny famenony izao, aiza no mifanaraka amin'izany? Izahay dia namaky azy ireo ho an'ireo sokajin-taona 4 lehibe, 1 0-13 taona, ary mazava ho azy fa tsy mila fanampiana fanampiny mialoha. Ary ho hitanao ihany koa ny valinteniko eto .14-19 taona, toy izany ny taonan'ny fahatanoranao. 20-39, noho izany dia ny taona antenatenanao, 20 sy 30 taona fotsiny.
Avy eo dia mandeha 40 sy miakatra fotsiny isika, ok. ary azontsika atao ny manasokajy sokajin-taona hafa, indrindra ho an'ny vitamina manokana. Fa inona avy ireo sokajy eto? Multivitamin.
Vitamina manokana. Fampiofanana mialoha. Vovoka proteinina sy vovoka fanoloana sakafo, asidra amine amine rojo vy.
Creatine. Formula fanarenana iraisana sy asidra matavy omega-3 avo lenta. Eny, ireo rehetra ireo no tena mandrafitra ny lahatsoratro kabinetra vitamina.
Raha mbola tsy nahita an'io ianao dia mila mijery ilay lahatsoratra. Eto dia eto. Mendrika hijerena izany.
Efa ela ny ankizilahy no nanontany ahy hoe: 'Jeff, inona marina no raisinao isan'andro?' Novakivakiniko izy io, tavoahangy ara-bakiteny tamin'ny tavoahangy, inona izany ho anareo izay efa nahita ity lahatsoratra ity. Raha ny amin'ny taona sy ny mety, mino aho fa multivitamin dia mety amin'ny sokajin-taona rehetra. Ankehitriny dia misy ny adihevitra momba ny mahasoa na tsia.
Heveriko ho toy ny politika fiantohana izany. Heveriko fa amin'ity sokajin-taona ity dia misy ary hafa mihitsy, fa eto no tsara kokoa ny sakafonao. Ary matetika aho no manome tsiny ny ray aman-dreny noho ny zava-misy fa 10 taona eo ho eo ny zanakareo dia mbola mihinana banga foana satria noheverinao fa mahafatifaty rehefa feno 4, 5, 6, 7, 8 taona izy ireo.
Tokony hampianarinao azy ireo fahazarana eto satria io no tena mampitombo ny tahan'ny matavy loatra ao amin'ny ankizy satria tsy nianatra ireo fahazarana izy ireo ary tena manomboka manomboka manova ny vatany tsy ho ela noho ny fahamaotiana. Raha tsy mampianatra azy ireo eto ianao dia hanana olana kely amin'ny manaraka. Ka, sakafo ara-dalàna.
Ny Diet dia tokony hahatratra 98 isan-jaton'ny zavatra rehetra eto. Multivitamin, eny. Mety ho fiantohana.
Vitamina manokana. Misy fepetra sasany izay azo ankasitrahana amin'ny alàlan'ny fihinanana vitamina manokana toy ny vitamina D na vitamina B6 na B12. Mety mety amin'ny olona amin'ity sokajy ity izany.
Ny vitamina manokana sasany dia mety miasa zavatra eto. Heveriko fa ny antony dia ao amin'ny vitaminina 14 ka hatramin'ny 19 taona vitsivitsy hafa vitaminina manokana mba tsy hampianarana fotsiny ny andraikitra hamaly ny sasany amin'ny filanao ara-tsakafo amin'ny alàlan'ny famenon-tsakafo. Mamorona fahatsiarovan-tena fa mety tsy mahazo ny zava-drehetra amin'ny sakafo aho satria mbola tsy manana lafatra.
Fa vitako. Mila mampiasa fanampin-tsakafo aho hamahana ny lesoka sasany nataoko. Tiako vitamina manokana eto.
Ary mazava ho azy koa ny sisa amin'ny fiainana. Araka ny hitanao dia nanana an'izany betsaka tamin'ny lahatsoratro aho. Tonga eo amin'ity vondrona lehibe zavatra resahako ity aho ho toy ny karazana fampitomboana fampivoarana ny fampisehoana.
inona ny v ups
Heveriko fa tsy manolo-tena amin'ny sakafo mahavelona ianao ary teboka iray tena lehibe amin'ity lahatsoratra ity. Raha nisoratra tamin'ny sakafo iray misy dong dong, twinkies, sakafo nendasina ianao, mofomamy, vatomamy, izany rehetra izany, tsy mendrika ny hanohy ny fifanakalozan-kevitra akory ianao satria mieritreritra fa ny fakana famenon-tsakafo dia hahatonga anao amin'izay tianao. rehefa tsy mahazo ny ambin-tsakafo ianao Ny manamarina no nofinofy fantsona lehibe indrindra any. Ary ireo olona te hino anao fa mety izany no bastard lehibe indrindra eto ary fantatray fa nahita azy ireo izahay.
Aza raisina izy ireo. Aza raisina ny famenon-tsampiko raha tsy takiana aminao ny hanaraka drafitra fisakafoanana sahaza. Drafitra fihinanana sakafo mahasalama no tiako holazaina.
Tsy mila tonga lafatra izany. Niresaka momba izany koa izahay. Fa atombohy ny fanaovana fampielezan-kevitra hahazoana sakafo mahavelona kokoa satria tena mihinana ianao.
Ary raha mieritreritra ianao fa hanamboatra azy rehetra amin'ny alàlan'ny famenon-tsakafo, dia diso tanteraka ianao, fa raha ny bandy mijery ny lahatsoratro dia toa ny ankamaroan'izy ireo any, akaiky izy ireo. Betsaka ny olona mety matavy amin'ny 20 isan-jaton'ny tavy amin'ny vatany. Mety tsara amin'ny hazavana mety izy ireo, saingy rehefa mirehitra ny jiro dia tsy dia tsara loatra izany.
Azonao atao tokoa ny manomboka mandamina tsara sy manampy anao amin'izany satria manamora kokoa ny asa fihinanana. Io dia mamela ny tsy fitoviana ilaina mba hahazoana valiny amin'ny mpanjifanao rehefa mandeha ny fotoana. mahita sakafo mahavelona ary mieritreritra aho fa izany no ampahany lehibe indrindra amin'ny famenon-tsakafo.
Noho izany, fanazaran-tena mialoha. Ny fahatsapako momba ny fampiofanana mialoha, azo antoka fa tsy eto. Ireo tovolahy ireo dia mivezivezy mandritra ny fotoana sisa.
Tsy misy zavatra hafa hatoro anao ho anao. Eto amin'ny taona fahatanorana, eny fantatsika, indrindra ireo atleta, hanao fanazaran-tena mialoha izy ireo. Mitandrema amin'ny fampiofanana mialoha azonao.
Nasehoko anao ny ATHLEAN RX1 anao. Nanao ezaka be izahay mba hahazoana antoka fa tsy ampidirinay ny iray amin'ireo zavatra voarara. Nisafidy ny Fankatoavana NSF ho an'ny Fanatanjahantena izahay satria tsy te handalo fanandramana vokatry ny fampidirana ireo zavatra voarara amin'ny vokatra vokarinay.
ny fomba famonosana tantely
Tahaka ireo lahatsoratra nofaranako tamin'ny 1-3 dimethylamylamine, dia tsy teo am-piandohana intsony isika. Fantatray hatramin'ny voalohany fa singa ratsy ity. Nanalavitra an'io izahay.
Nisy ny mpanamboatra sasany. Ny sasany nanolo azy tamin'ny akora mampidi-doza vaovao. Ary vonona izy ireo hanao izay ilaina mba hitondranao azy ireo sy l. mahatsapa ny fonao mitempo avy ao amin'ny tratranao.
Izahay kosa etsy an-danin'izany dia miezaka mafy kokoa mba hanana angovo tsy miovaova. Iray izay tsy hamela anao hianjera. Izay manome anao angovo.
Fantatray fa atleta atleta no heveriko fa mifanaraka amin'ny tanjonao. Raha atleta ianao ary mahatsapa fa mila azy ireo hijoro amin'ny fampihetseham-batanao na hiarina amin'ny lalaoo, dia fantatray ianao. Halaiko izy ireo.
Mazava ho azy fa mitovy eto ihany koa. Alain'ireo bandy zalahy araka ny tiany. Vovoka fanoloana proteinina sy sakafo.
Averiko indray, heveriko fa vovon-tsakafo proteinina dia foto-tsakafon'ny famenon-tsakafo tsara raha proteinina avo lenta. Manana amin'ny maro hafa ny horonan-tsary miresaka momba ny tsy fitovizan'ny proteinina sy ny mahatonga ny proteinina tsara kalitao ho proteinina tsara. Raha mandray proteinina avo lenta ianao dia heveriko fa foto-tsakafo izy ireo hahazoana antoka fa mahazo sakafo ara-dalàna ianao.
Azoko omena anao ny filazako fa nanolo ny sakafo vovoka aho tamin'ny fahazazako; Nesoriko ny sakafoko rehefa avy nianatra aho mba hahazoana antoka fa tsy nibolisatra tamin'ny fako aho. Ary mora loatra tamiko ny naka ny mofomamy sôkôla an'i Entenmann fa tsy ny fihintsanan'ny proteinina. Saingy rehefa nanomboka nirotsaka an-tsehatra bebe kokoa tamin'izay aho dia nanao izay hampihena ny proteinina ho mora ho ahy.
Nanao veloma ny cookies aho ary niarahaba ny abs voalohany teo amin'ny fiainako. Vovo-proteinina ka. Asidra amine amine rojo vy ankehitriny.
Niresaka izahay, hosaronako ireto, asidra amine amine rojo vy sy kôline. Mino aho fa mino mafy ny tombotsoan'ny creatine. Heveriko fa ny creatine dia iray amin'ireo fanampin-tsakafo fikarohana tsara indrindra any.
Sakafo ara-tsakafo izay eny an-tsena izay tsy azonao atao amin'ny be loatra na inona na inona lazain'ny olona amin'ny alàlan'ny sakafo fotsiny. Satria ahoana raha manandrana mihinana azy amin'ny vola ilainao ianao mba hahazoanao tombony ergogenika, mety hihinana hena be loatra ianao izay mety hiteraka olana hafa raha mahazo ny vola azonao ianao dia tsy maintsy mihinana fotsiny mba hahazoana ilay creatine irery . Ka maninona raha mandeha, rehefa manandrana mahazo fanampin-tsakafo ergogenika an'ny creatine ianao, maninona raha manampy famoronana fotsiny? Izahay dia tianay kokoa ny creocolline noho ny creatine noho ny toetrany tsy dia be asidra loatra noho ny fahafahany mihinana nefa tsy manodina sy mamono ny creatine, ary noho ny tsy fisian'ny fiovam-po ho an'ny kôlinina dia afaka manao an'io amin'ny fomba mahomby kokoa amin'ny asidra amine rojo vy mifangaro izahay. miaraka amin'ny vovon-tsinay proteinina RX2 Izany no iray amin'ireo antony nanehoako ny RX2 ho zavatra raisiko.
Averina indray, azonao atao ny mandray ny famenonanao manokana, ry havana. Tsy mandray ny famenon-tsaiko io ary io no miaraka amin'ny lahatsoratra. Manaova fikarohana manokana.
Hoy aho hoe: 'Manana ny anay isika ary nikaroka ny tombotsoan'ny rehetra 3. Ary heveriko fa ho an'ny sokajin-taona rehetra 3, indrindra ireo izay mitady ny fanamorana hahazoana antoka fa manana fananganana hozatra ampy izy ireo, proteinina avo lenta amin'ny sakafon'izy ireo tohanan'ny asidra amine amine misy sampana ary tohanan'ny creatine izay miendrika Feel Kreokolin amin'ny endriny iray. Manamora be azy fotsiny izany noho ny manana tavoahangy 6 na tavoahangy 4 samy hafa.
Eto. Fiaraha-miala sasatra sy omega-3 avo lenta no farany 2 noresahantsika indray, tao amin'ilay lahatsoratra. Cs omega-3s no novolavolain'ny dadako 30 taona lasa izay.
Efa elaela aho no nanana an'io, nitombo niaraka tamin'ny raiko nahavita azy. Ary ny Joint Mechan-X, ATHLEAN RX Mechan-X, ity ny paika vaovao hanarenana ny tonon-taolana. Maniry aho fa hanana an'io ela be io satria mety ho fantatrao ny tantarako raha nahita ilay lahatsoratra ianao.
Ny lohalika ratsy, ny soroka ratsy, ny soroka vao niseho vao tsy ela akory izay; Ny lohalika dia olana efa hatry ny ela, heveriko fa raha atleta ianao na raha mampiofana mafy, amin'ny fampiofanana mafy dia midika fa mpandeha gym matetika ianao, matotra amin'ny fampihetseham-ponao ianao. Miezaka manery lanja bebe kokoa ianao. Miezaka mihamatanjaka hatrany ianao.
Midika ireo raharaham-barotra ireo tovolahy ireo, ireo tovolahy ireo dia tokony handray ny Joint Recovery sy ny fanarenana ny hozatra, ireo toetra manohitra ny inflammatoire an'ny omega-3 avo lenta amin'ny faha-20 taonanao. Indrindra amin'ny faha-20 taonanao, eto indray manokana, ary izany no hevitro, ho azoko roa; Noraisiko ny omega-3. Mety ho noraisiko ny raikipohy fanarenana ho hetsika mihetsiketsika hanampy ahy tsy ho amin'ny toe-javatra iainako ankehitriny satria be ny fahavoazana nataoko avy amin'ny fanatanjahantena any amin'ny lisea, ny fanarenana miaraka rehefa tsy nahatsapa fanaintainana aho tamin'izany dia efa nisy toe-javatra tsara kokoa araka ny eritreritro izao raha nalaiko izany.
Ka fanapahan-kevitry ny tsirairay na horaisinao na tsia mandritra ireo taona ireo. Fa raha mifaninana ianao, na raha mifaninana na manosika ny tenanao ao amin'ny efitrano lanja dia tena handray izany aho. Eto, 20-39 taona.
Mazava ho azy. Heveriko fa tena mety tokoa ireo na dia tsy mahazo aina mahazo aina aza ianao amin'izao fotoana izao, satria raha manao fanatanjahan-tena lava ianao dia mety fantatrao fa misy zavatra mandratra anao dieny izao. Raha ny tena izy dia fantatro fa mety misy fiarahan-toerana mitanjozotra na mahatonga anao tsy mahazo aina.
Matetika dia avy amin'ny valin'ny fampiofanana nataonao izany. Tsy afaka ny ho tonga lafatra foana ianao, ok. ary avy eo indray, azo antoka fa manomboka amin'ny 40.
Heveriko ry havana eto, tsy misy dikany izany. Efa manana olana ianao. Izy ireo dia efa mahatsapa ny fitarainana amin'ny fiainany andavanandro izay mitarika azy ireo hampiasa raikipohy fanarenana iraisana sy Oomega avo lenta. 3s tadiavina, saingy heveriko fa ity dia vintana tsara kokoa ho anao hihetsika, indrindra raha atleta ianao.
Ka ity indray ity karazana kabinetrako ity dia mizara sokajy lehibe indray. Ity dia karazana fandaharam-potoana. Te hamaly an'ity fanontaniana ity ho anao amin'ny antsipiriany bebe kokoa momba ny mety sy ny tsy mety aho.
Tsy nahita zavatra iray ianao teto. Tsy mbola nahita prohormones ianao. Mbola tsy nahita famenon-tsakafo fanosotra testosterone hosoloina ianao, mbola tsy nahita na iza na iza amin'ireny lehilahy maloto ireny.
Izay mandeha lavitra ahy ary miverina any amin'ny diarin'i Andresin Mark McGuire mipetraka eo amin'ny fitoeram-bokiny, izay nanjary efijery setroka ho an'ny zava-nisy marina, ireo fanampiana ireo dia tsy tsara fotsiny. Ary izay mivarotra anao ireto koa, tsy eo amin'ny pejy iray ihany aho. Izay ihany no azoko lazaina, ara-etika sy ara-pitondrantena dia tsy eo amin'ny pejy iray ihany isika.
Izaho dia hitarika anao hiala amin'izany. Tsy mila an'ity junk ity ianao. Ny hany ilainao dia ny fototra eto sy ny fanoloran-tena hihinana tsara.
OK. Raha mitady fanoloran-tena ianao ary te-hiaro sakafo ara-dalàna dia afaka manao izany ry zalahy. Napetrako ho anao ny drafitra fisakafoanana ATHLEAN-X FACTOR.
Izy io dia fanoloran-tena hihinana tsara. Tsy misy gimikika. Tsy misy sakafo fihinanana.
Tsy misy, avelako hihinana ianao. Ataoko mihinana sakafo tena izy ianao. Omeko fomba tsotra be ianao hanatanterahana izany.
Tsy tereko ianao ho tonga mpahandro hianatra ireo fomba fahandro vaovao. Azo atao izany. ary raha azo atao dia azo zahana ihany koa.
Ary raha afaka manaraka azy ianao dia afaka mifanaraka amin'izay, ary izany no lakileny. Ary ny momba ny famenony, ny olon-kafa toa nasehoko taminareo tao amin'ny lahatsoratra farany, ny zavatra raisiko dia izay atolotro anao. Tsy hanome sosokevitra zavatra ho anao mihitsy aho izay tsy raisiko manokana na tsy azoko antoka manokana.
Ary mazava ho azy fa izany no nahatonga anay nanao ny fanampin-tsakafo ATHLEAN RX. RX1 no fampiofanana mialoha. RX3 no fanarenana proteinina isan-kariva izay latsaka ao anaty vovo-proteinina.
Ary mazava ho azy, ny RX2 anay dia ny fampihetseham-batana ataontsika izay misy koa ny Acide Amino amina Chain sy Creocolinein, izay raisiko fa ny fehiny dia ny manolo-tena ho amin'ny sakafo tsara. Mahazoa mifanaraka. Manalavira ny fako, ankavanana ary mifikitra amin'ny drafitra iray ary ho hitanao tokoa ny valiny amin'ny famenonao.
Manantena aho fa nanampy ity lahatsoratra ity. Manantena aho fa rava io ary nanome anao hevitra vitsivitsy. Ie lava izany fa mahatsapa aho fa tokony horesahintsika tsara daholo ry zalahy fa hiverina eto isika afaka andro vitsivitsy dia alao antoka fa avelao etsy ambany ny fanehoan-kevitrao, asio thumbs up, ary ampahafantaro ahy hoe inona koa ny mbola misy manarona azy.
Raha momba famenon-tsakafo manokana ity dia ampahafantaro ahy eto ambany. Mety hanana lahatsoratra momba an'io isika ato anatin'ny herinandro ho avy. Eny ry havana, hiverina tsy ho ela isika.
Voaro ve ny Beta Alanine mandritra ny fotoana maharitra?
Amin'izao fotoana izao, tsy misyfiarovanadata momba nyela-tenyfampiasana nybeta-alanine(izany hoe,> 1 taona). Na izany aza, noho ny toetra tsy ilaina an'io mpiorina io (izany hoebeta-alaninedia novokarina tamin'ny endogenous), ny metyfiarovanaambany ny ahiahy.dimy ambin'ny folo. 2015.
Manatsara ny fiaretana ve ny beta alanine?
Beta-alaninenanjary neken'ny besinimaro ho otrikaina mahomby be ho an'nyfiofanana miaritraary hazakazaka. Ny fanadihadiana dia naneho mazava fa fitaovana mahomby izy iofanamafisana ny fiaretana fiaretanaary mihazakazaka mamaky nyfanatsaranaamin'ny fahafaha-miasa, VO2 ary ny tokonam-baravaran'ny lactate.2. 3. 2017.
Tsara ho an'ny bisikileta ve ny creatine?
Soa azo avy amin'nyCreatineHO AN'NYmpitaingina bisikilety
Fikarohana maromaro no namintina izanympamoronafamenony diaFIASANA MAHOMBYamin'ny fampitomboana ny hozatra sy ny tanjaka amin'ny alàlan'ny fiofanana amin'ny fanoherana. Ankoatr'izay,mpamoronamanampy amin'ny fampitomboana glycogen hozatra, noho izany ny famatrarana karbôtika miaraka aminympamorona, izay mety hanampy anao amin'ny faran'ny dia lavitra.
Mandra-pahoviana ianao no afaka mihinana beta alanine?
BY MOUTH: Ho an'ny fanatanjahantena atletisma: 2.4-6.4 grama an'nybeta-alanineisan'andro dia nampiasaina hatramin'ny 10 herinandro. Ho an'ny fampisehoana ara-batana amin'ny olon-dehibe efa lehibe: 800 mg intelo isan'andro no nampiasaina hatramin'ny 28 andro. 800-1600 mg indroa isan'andro no nampiasaina hatramin'ny 12 herinandro.
Moa ve ny beta alanine miteraka tsy fihenan'ny erectile?
Inona no atahorana horaisinabeta-alaninefanampin-tsakafo? Ny olona sasany dia nitatitra ny fikolokoloana ny hoditra rehefa avy naka fatra betsakabeta-alanine.Beta-alanineMety hifandray amin'ny fanafody am-po sasany sy amin'ny zava-mahadomelinafihenan'ny erectile.14.01.2021
Mampitombo lanja anao ve ny Beta Alanine?
Beta alanine manaotsy misy mampitombo ny hozatratombonyna maymatavy, fa,izanybuffers manohitra asidra miorina izay mamela ny olona hiasa mafy kokoa sy lava. Ny valiny azo avy amin'izany dia hozatra lehibe kokoatombonySYmatavyfahaverezana.08.15.2018
Misy fiatraikany ve ny beta alanine?
Rehefa nalaina am-bava:Beta-alanine diaAZO ATAO raha azo atao am-bava mandritra ny fotoana fohy.Ny vokany dia misytsy notaterina tamin'ny fatra antononybeta-alanine. Dosis avomety hiterakafikosehana sy fikolokoloana.
Beta-Alanine ve dia fampihetsehana mialoha?
Beta-alaninedia asidra amine tsy ilaina izay hita voajanahary ao amin'ny vatana. Na izany aza,beta-alanine'stombony lehibe amin'ny maha aHO AN'NY-mikotranany akora dia ny fahafahany mampitombo ny haavon'ny karnosine hozatra.
Ahoana no hanatsaran'ny beta alanine ny fahombiazan'ny bisikileta?
Ireo valiny ireo dia manome porofo misimisy kokoa fa ny beta-alanine dia afaka mahazo tombony amin'ny fahombiazan'ny bisikileta, indrindra amin'ny hetsika izay mitaky sprint na herinaratra.
Azo antoka ve ny mandray beta alanine amin'ny fihazakazahana?
Soa ihany ho an'ireo bisikileta sy mpihazakazaka, beta-alanine dia manatsara ny bisikileta sy ny fampisehoana hazakazaka. Azo atao ihany koa ny manatratra ireo tombontsoa ireo amin'ny beta-alanine grama vitsivitsy monja isan'andro. Ho tambin-karama fanampiny, beta-alanine dia iray amin'ireo fanampiana fanampiny amin'ny fikarohana lalindalina kokoa, miaraka amin'ny fanadihadiana 60 farafahakeliny momba ny vokatra ergogenika.
Rahoviana no fotoana tsara indrindra hanaovana beta alanine?
Ny beta-alanine dia mandaitra amin'ny fampihetseham-batana fohy, na eo am-piandohan'ny fampihetseham-batana (ohatra, amin'ny 4 minitra voalohany) na ora maro mankany amin'ny ady. Van Thienen sy ny mpiara-miasa aminy dia nandalina beta-alanine sy ny vokany teo amin'ny fampisehoana avy hatrany taorian'ny hazakazaka am-bisikileta nitaingina 110 minitra (3).